Haifa မြို့ နှင့် Akko မြို့ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » Haifa မြို့ နှင့် Akko မြို့
Haifa မြို့ နှင့် Akko မြို့
Posted by hmee on Dec 21, 2011 in Creative Writing, Travel | 19 comments
တောင်စောင်း တလျှောက်က အိမ်တွေကို ဓါတ်ပုံရိုက်ထားတာ။
သစ်သီးဖျော်ရည်ဆိုင်။ ကျွန်မတို့ဆီလို ရေရောပြီး သောက်ကောင်းအောင် ဖျော်တာ မဟုတ်ပဲ အသီးရဲ့ သဘာဝအရသာ အတိုင်း ညစ်ပြီး ထည့်ပေးတာမို့ သောက်တောင်မသောက်နိုင်ဘူး။
သင်္ဘော မစီးရဲလို့ တယောက်တည်း ကျန်နေတုန်း လျှောက်ရိုက်ထားတာ။
AKKO မြို့က အဆောက်အဦးပါပဲ။
AKKO မြို့က ရှေးဟောင်း အဆောက်အဦးတခု။ အထဲဝင်ခွင့်မရတော့ပါဘူး။ ပြိုတဲ့နေရာက ပြိုနေလို့ ပြုပြင်မှုတွေ လုပ်နေတာ တွေ့ခဲ့ပါတယ်။
လှေကားထစ် အောက်ခြေက ရေပန်းလေး။
ကျောင်းဘက်ကနေ လှေကားထစ်ဖက်အခြမ်းကို ရိုက်ထားတာ။
ကျောင်းကို လှေကားထစ်တွေ ဘက်ကနေ ရိုက်ထားတာ။
ဟိုက်ဖာမြို့ဟာ အစ္စရေးနိုင်ငံ မြောက်ပိုင်းမှာတည်ရှိပါတယ်။ ဟိုက်ဖာမြို့ဟာ ဘာလို့ ထင်ရှားသလဲဆို ဘုရားတစ်ဆူတည်း ၀ါဒကို ယုံကြည်တဲ့ ဘဟာအီဘာသာဝင်တွေရဲ့ the Baha’ullah (1817-1892) ရဲ့ ရုပ်ကလာပ်ကို မြုပ်နှံထားရာ The shrine 0f the Bab ၇ှိလို့ပါ။ The Bab ကွယ်လွန်ပြီး နှစ်ပေါင်း ၆၀ ကြာ ၁၉၀၉ ခုနှစ်မှ သူ့ရုပ်ကြွင်းကို carmal တောင်ပေါ်ရှိ Abdul Baba ကိုယ်တိုင် ဆောက်လုပ်ထားတဲ့ ကျောင်းတော်မှာ ထည့်သွင်း မြုပ်နှံခဲ့ပါတယ်။ တောင်ကုန်းပေါ်ရှိ ရွှေရောင်လိပ်ခုံးအမိုးပါ ကျောင်းတော်ကို ဗဟိုပြုပြီး စက်ဝိုင်းပုံ လှေကားထစ်ဥယာဉ်ကို ဆောက်ထားတာများ အံ့သြဖွယ် ရှုမငြီးစရာပါ။ ဥယာဉ်ဟာ တောင်ထိပ်ကနေ ဟိုက်ဖာမြို့လယ်ထိ တစ်ကီလိုမီတာရှည်ပါတယ်။ ဥယာဉ်တည်ဆောက်ဖို့အတွက် ကမ္ဘာတ၀ှမ်းမှာ ရှိတဲ့ ဘဟာအီဘာသာဝင် ငါးသန်းကျော်က အလှုငွေထည့်ဝင်ကြတာပါ။
ကျွန်မတို့ ဟိုက်ဖာမြို့ကို ရောက်သွားတော့ ပထမဆုံး အပေါ်ဆုံးကို ကားနဲ့ တက်သွားကြပါတယ်။ အပေါ်ကနေ လှေကားထစ်တွေ အတိုင်း အောက်ကို ပြန်ဆင်းမယ် စိတ်ကူးနဲ့ပါ။ ဒါပေမဲ့ ပန်းခြံပြုပြင်နေလို့ ပိတ်ထားတာမို့ ဆင်းခွင့်မရခဲ့ပါဘူး။ တောင်ကုန်း တလျှောက်မှာလည်း အိမ်တွေက လှမှလှပါ။ ဒီနိုင်ငံမှာ ထူးခြားတာတခုက နိုင်ငံပဲသေးလို့လားတော့မသိ မြေပြန့်ပြန် ရှိတဲ့ နေရာတွေ အားလုံးဟာ စိုက်ခင်းတွေ ကြည့်ပါပဲ။ အိမ်တွေ မြို့တည်ထားတာတွေက အားလုံးနီးပါး တောင်ကုန်း တောင်စောင်း တလျှောက်တည်ထားတာကြည့်ပဲ။ အိမ်တိုင်းရဲ့ ရှေ့ကို ကားလမ်းလည်း ပေါက်ပါတယ်။ သိုပေမဲ့ တချို့နေရာတွေဟာ အတော်ကို မတ်စောက်ပါတယ်။ ကားကောင်း ဘရိတ်ကောင်းလို့သာ နို့မို့ဆို မတွေးရဲစရာပါပဲ။
ကျွန်မတို့လည်း ပထမဆုံး ကျောင်းထဲ ၀င်ကြည့်ကြပါတယ်။ ဖိနပ်မစီးရ၊ ဦးထုတ်မဆောင်းရ၊ ဆေးလိပ်မသောက်ရ၊ ပီကေမစားရ၊ ဓါတ်ပုံ မရိုက်၇ပါဘူး။ ခိုးရိုက်လို့တောင်မ၇အောင် အစောင့်တွေက သေချာကို စောင့်နေတာ။ ၀င်ဝင်ခြင်း သံတံခါးမကြီးမှာ မူစလင်ဘာသာတွေရဲ့ အထိမ်းအမှတ် ကြယ်နဲ့ လပုံ ထွင်းထားတာတွေ့ပါတယ်။ အထဲဝင်လိုက်တော့ မှန်ကာထားတဲ့ အထဲမှာ ပန်းအိုးကြီး နှစ်လုံး ပဲတွေ့ရပါတယ်။ တချို့ကတော့ ထိုင်လျှက် ၀တ်ပြုနေတာတွေ့ရဲ့။ ကျွန်မတို့လည်း တခြားဘာမှ ကြည့်စရာ မရှိတာနဲ့ ပြန်ထွက်။ အပြင်ဘက်ကနေပဲ ကျောင်းတော်ကြီးကို ဓါတ်ပုံရိုက်။ လှေကားဥယျာဉ်ကို ရိုက်ပေါ့။ ပြီးတာနဲ့ လှေကားထစ်က ဆင်းမရလို့ ကားပေါ်ပြန်တက် တောင်ထိပ် ရှု့ခင်းသာကို သွားပြီး ဟိုက်ဖာမြို့ရဲ့ ဆိပ်ကမ်းမြို့ကို အပေါ်စီးကနေ ဓါတ်ပုံတွေ ရိုက်ပြန်တာပေါ့။ ပြီးတော့မှ တောင်ခြေကို ဆင်းလာပြီး တောင်ခြေကနေ တခါ လှေကားဥယျာဉ်အလှကို မှတ်တမ်းတင်၇ ပြန်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ခဏနားပြီး ခရူးဆိတ်စစ်ပွဲတုန်းက ခံတပ်မြို့ AKKO မြို့ကို ဆက်လက် ချီတက်ကြပါတော့တယ်။
မြို့ထဲစ၀င်တော့ တကယ် ကျောက်တုံးတွေနဲ့ တည်ထားတဲ့ ရှေးဟောင်းမြို့ရဲ့ အလှအပကို တမေ့တမော ခံစားရင် လျှောက်ကြည့်ကြပါတယ်။ တချို့နေရာတွေကတော့ ၀င်ခွင့်မရပါဘူး။ ပြိုကျနေတာတွေကို ပြုပြင်နေတာတွေလည်း တွေ့ခဲ့ပါတယ်။ နောက် သူက ဆိပ်ကမ်းမြို့မို့ အပျော် သင်္ဘောစီးလို့ရပါတယ်။ ကျွန်မကတော့ သွေးမရဲလို့ မစီးရဲတာနဲ့ ကမ်းစပ်မှာပဲ ကျန်နေခဲ့ရလို့ ပင်လယ်ဘက်ကနေ ဆိပ်ကမ်းအလှကို ဓါတ်ပုံမရိုက်ခဲ့ရဘူး။ အိမ်ဦးနတ်ကြီးက ကင်မရာကို သဘောင်္ပေါ်မယူသွားပဲ ကျွန်မဆီမှာ ထားခဲ့တာ မှားတာပဲ ပြောမှ ကျွန်မမှာ ဓါတ်ပုံတွေ မရိုက်လိုက်ရလို့ အပြန်လမ်း တလျှောက် စိတ်ကို မကောင်းဘူး။ နောက် စစ်ပွဲတုန်းက အသုံးပြုခဲ့တဲ့ ဥမင်တွေကိုလည်း ပြုပြင်ထားတာကို ၀င်ကြည့်ခဲ့ပါသေးတယ်။
ကျောင်းတော်ပါ။ကျောင်းတော်ကို ရှေ့တည့်တည့်က ရိုက်ထားတာ။
တယောက် ရှကယ် ၁၀ပဲပေးရပါတယ်။ ဓါတ်ပုံတွေ ရိုက်ခဲ့ပေမဲ့ ကင်မရာက အပျော်တမ်း ကင်မရာလေးမို့ အကုန် မဲမှောင်ပြီး မမြင်ရပါဘူး။ ဒါလည်း စိတ်မကောင်းဘူး။ ရွာထဲက ကင်မရာမန်းတွေဆိုရင်တော့ တကယ့်ရှယ် ဖြစ်မှာ။ ရှေးဟောင်း သမိုင်းဝင် တံတိုင်းကာ ဆိပ်ကမ်းမြို့ကြီးကို လေ့လာခွင့်ရတာ နဲတဲ့ အခွင့်အရေး မဟုတ်တာမို့ ကိုယ့်ဘာသာ ဂုဏ်တောင် ယူမိသေးတယ်။ ခရူးဆိတ်စစ်ပွဲများ ၁၁၀၄မှ ၁၂၉၁ ခုနှစ်ကာလက ပေါ်ထွန်းခဲ့တဲ့ သည်မြို့ဟာ ဒီနေ့ခတ်ထိ မပျက်မစီး တည်ရှိနေတာပါ။ တကဲ့သမိုင်းဝင်နေ၇ာတွေမို့ လေ့လာလို့ကို မကုန်နိုင်အောင်ပါပဲ။ တကယ့်ကို အစဉ်အလာကြီးခဲ့တဲ့ နေရာမို့ ရွာသူားတွေ လေ့လာနိုင်အောင် မှတ်တမ်းတင်လိုက်ပါတယ်။
*** အရင်တခါ ရေးတာ အားလုံးပြီးမှ ပျောက်သွားလို့ နှမျှောလိုက်တာ။ အခု ဒုတိယ တခေါက် ပြန်ရေးတာ ပထမ ရေးတာလောက် အားမပါလို့ထင်ရဲ့ ကိုယ့်ဘာသာတောင် မကြိုက်ချင်ဘူး။ သည်းခံပြီးသာ ဖတ်ပေးကြပါရန် ကြိုတင်တောင်းပန်အပ်ပါတယ်။ *********
ဟိုက်ဖာမြို့ ကို ရောက်တုန်းက အစ္စရေး နိုင်ငံရဲ့ နာမည်ကြီး ဘောလုံးကလပ်အသင်း
မက္ကာဘီဟိုင်ဖာ ဘောလုံးကလပ်အသင်းဆီ အလည် ဝင်ဖြစ်ခဲ့သေးလားဗျ ။
မောင်ပေေ၇ မမှီဖြင့် အဲ့သည်ကလပ် ရှိမှန်းတောင် မသိဘူး။ မောင်ပေကတော့ ဘော်လုံးကိုတော်တော် ၀ါသနာကြီးပုံ၇တယ်နော်။
အဲဒီ AKKO ဆိုတဲ့ မြို့ မှာ ကတွတ်ပီ (မယားကြောက်) တွေ အများကြီး ရှိတယ်
ကြားဖူးတယ် ။ ဟုတ်သလား အရီး ။
အဲ့လူဂျီးတော့ လုပ်ပြီ … သူများတကာပို့စ်အကျည်းတန်အောင် …ပဲလှော်ဝင်ဝင်နှိုက်တယ် … ။ နောက်တခါ ရေးရင် လက်ဖြတ်ပစ်မယ်
တွတ်ပီတွေကတော့ ကမ္ဘာနဲ့အ၀ှမ်း နေရာတိုင်းမှာရှိတာပါပဲ … ။ သိပ်အထူးဆန်းတော့မဟုတ်ပါဘူး … ဒါနဲ့ စကားမစပ် … တွတ်ပီဘိုးအေကြီးတော့ မြန်မာနိုင်ငံထဲက တနင်္လာမြို့တမြို့မှာ ကျောက်ပျဉ်သွားရွက်နေတယ်တဲ့ ကြားမိသေးလား
မမှီရယ် လှေကားထစ်ဥယျာဉ်လေးကို ဆောက်ထားတာ စိတ်ကူးကောင်းလိုက်တာ ….
ဒါနဲ့ အောက်ဆုံးပုံက တိဘက်ဘုန်းကြီးကို အဖြူတယောက်က ထီးဆောင်းပေးနေပါလား ….
ဟုတ်တယ် pooh ရေ မမှီ အစ္စရေးကို စရောက်စက သွားတုန်းက ဓါတ်ပုံတွေပါ။ စာရေးဖို့ အာရုံမနည်းယူ၇တယ် သွားဖူးတာ အခုဆို နှစ်နှစ်တောင် ရှိပြီလေ။ အဲ့တုန်းက တိဘက်ဘုန်းကြီးတွေ တော်တော်များများတွေ့တယ်။ လေ့လာတယ်ထင်တာပဲ။ ထီးဆောင်းပေးထားတဲ့ အဖြူက ဂျုးရုပ်ပဲမို့ မမှီတော့ ဂျုးထင်တာပဲ။ ဒီလောက် ပူပြင်းပြီး မိုးလုံးဝနီးပါး မရွာတဲ့နေရာမှာ ဒီလို စိမ်းစိုလှပပြီး ပန်းတွေ ရောင်စုံ အမြဲတမ်းပွင့်အောင် လုပ်ထားနိုင်တာ နဲတဲ့ အရည်အချင်းတော့ မဟုတ်ဘူး။
အီးဒုံးရဲ့ ဒေါက်တာ AKKO ကို သာမန်လူမှတ်တာ။ အစ္စရေးနိုင်ငံကတောင် မြို့နာမည်ပေး ဂုဏ်ပြုထားရတဲ့ ဆရာဝန်လေးကိုး။။။။ ထောက်လှမ်းရေးမော့ဆက်နဲ့ ဘာများပတ်သက်မှု ရှိပါလိမ့်။ ဒါနဲ့ အီးဒုံးဆိုတဲ့ မြို့နာမည်ရော အဲဒီမှာ ရှိအုံးမလား ရှာကြည့်ပေးပါဗျို့။။။
AKKO မြို့လေးမှာ ပြတိုက်လေး တစ်ခုရှိတယ် ၊ ပြတိုက်နာမည်က အီးဒုံတဲ့
မမှီရေ အသစ်ရေးရတာ တော်သေးတယ် တစ်ခုခုကြောင့် အဟောင်း နှစ်ခါပြန်ရေးရတဲ့ ဒုက္ခက မလွယ်ဘူးနော် ၊ မမှီ ကျေးဇူးကြောင့် အစ္စရေးနိုင်ငံနဲ့တောင် တော်တော် ရင်းနှီးနေပြီ၊
နောက်ပို့စ် တွေ ဆက်တင်ပေးနော် သေချာဖတ် သေချာမှတ်နေတယ်
ကိုကြောင်ရေ ကျွန်မ အဲ့မြို့ကို အလည်သွားတုန်းက ရွာသူ မဖြစ်သေးလို့ သတိမထားမိသေးဘူး။ နောက် ရွာထဲမှာ နေတာ ကြလာတော့ အဲ့မြို့ နာမည်ကြားတိုင်း ဘာမှ မဆိုင်ပဲ ဒေါ်တုံကို သွားသွား သတိရမိတယ်။
AKKO မြို့ဆိုလို့ စိတ်ဝင်စားသွားတယ် ၇ွာထဲက AKKO တို့များြိမို့တည်လိုက်ပြီလားလို့
အစ္စရေးနိုင်ငံ မြို့နာမည်ဖြစ်နေတာကိုး ..
သူများတွေ သတိမထားမိပဲ ကျော်ဖတ်နေတာကို ဟိုကဏန်းကြီး 77ကစပြီး … ပွားတယ် .. ဟွန့်.. ။ ပြောသေးတယ် ..ကတွတ်ပီတွေရှိသေးတယ်ဆိုပဲ … သူ့ကမှ ပိုဆိုးသေး … မိန်းမလည်းကြောက်ရ .. ယောက္ခမလည်းကြောက်ရနဲ့ …
ကိုကြောင်ကြီးကလည်း အီးဒုံးမြို့တဲ့ … ငှီး …
ကိုဖြောင်ယူကလည်း .. အီးဒုံးပြတိုက်တဲ့ …
အစ်မနွယ်ပင်ကလည်း တစ်ရွာတကျည်တည်ခိုင်းနေတယ် .. ဟွန့် … အော်သာငိုချင်ပါတော့တယ်
မမှီရေ ဗဟုသုတများစွာရပါတယ် .. ကိုယ်မမြင်ဖူးတဲ့ မြင်ကွင်းမျိုးနဲ့ ကိုယ်မသိတဲ့အကြောင်းရာမို့ ဖတ်ရတာ တန်တဲ့ပို့စ်လေးပါပဲ … ။ စိတ်ကူးကောင်းကောင်းနဲ့ တင်ပြပေးထားလေးကလည်း ဓါတ်ပုံလေးတွေနဲ့ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်လှပါတယ် … အမှတ်တရအရောင်းဆိုင်က ပစ္စည်းလေးတွေက ကြွေထည်တွေလားဟင် … ကြွေသားကတော့ သိပ်ကောင်းမယ်မထင်ဘူးနော် .. ဒါပေမယ့် သူတို့ အသားပေးထားတာက ဒီဇိုင်းဖော်ထားတဲ့ အနုပညာလက်ရာဖြစ်မယ်ထင်တယ် … ။ ဈေးကရော အကြမ်းဖျဉ်းဘယ်လောက်ရှိလဲဟင် …. ။ ဒီဇိုင်းဖော်ပြီး ဒီနိုင်ငံမှာလည်း ရောင်းတယ်လေ .ကြွေထည် နှစ်ရောင်စပ်ထားတာ … အဖြူထည်တော့မဟုတ်ဘူး … အနက်ရောင်အောက်ခံကို အ၀ါရောင်တွေနဲ့ ခြယ်ထားတာ .. မမြင်ဖူးတော့ ခဏကိုင်ကြည့်မိတယ် … ဈေးမေးလိုက်တော့ … ဒေါ်လာ 100 အထက်တွေချည်းပဲမို့ … မကွဲအောင် ပြန်ချထားလိုက်တယ် … လိုကယ်ကလူတွေကတော့ သိပ်မ၀ယ်ပါဘူး .. နိုင်ငံခြားသားတွေပဲ အ၀ယ်များတာ … ။
တောင်ပေါ်မှာတောင် တိုက်တွေတည်ထားတာ လုံးဝအငြိမ်ပဲနော် … ။ ရှုခင်းတွေက အရမ်းမိုက်တယ် … အိမ်တွေ ပြွတ်သိပ်နေတာတောင် လန်းဆန်းတဲ့ ခံစားမှုရနိုင်တဲ့မြို့လေးတွေပါပဲ… ။ တစ်ခါတစ်လေ လွပ်လပ်တဲ့ ခံစားမှုက သိပ်အရေးကြီးတယ် မမှီရေ …. ။
စာတွေတင်ပြီးပျောက်သွားတယ်ဆိုတော့ …. နောက်ဆို word file ထဲမှာ ရေးဖို့ အကြံပေးချင်တယ်မမှီရေ … ။ ဒီဆိုဒ်ထဲမှာ နယူးပို့စ်ယူပြီး တခါတည်းရေးရင်း ကော်နက်ရှင်မျက်လှည့်ပြတဲ့အခါ ရေးသမျှ ပြောင်သွားခဲ့ဖူးတာကြောင့် နောက်ပိုင်း အပြင်မှာရေးပြီး ပြန်ကူးပဲတင်တော့တယ် … ။
ကြွေထည်တွေပါ တုံရေ။ ဒါတွေက အလှထားဖို့အတွက် ထင်တာပဲ။ ပုံလေးတွေက များသောအားဖြင့် ဂျေရုစလင်မြို့ပုံတွေများတယ်။ သူတို့ရဲ့ အမှတ်တရ ပစ္စည်းတွေက တောင်စောင်းမှာ တည်ထားတဲ့ မြို့ပုံတွေများတယ်။ ဒီမှာရောင်းတဲ့ ကြွေပန်းကန်တွေကို မမှီချစ်ချစ်ကြီးက ဘာပြောတယ်ထင်လည်း ၀င်းသူဇာက ပန်းကန်တွေလောက်ပဲ ကွာလတီရှိတယ်တဲ့။ ညိုညစ်ညစ်တွေများလို့လေ။ တောင်စောင်းတွေမှာသာ မြို့တည်တာ ဘယ်လောက်မက်စောက်မက်စောက် ကားလမ်းတော့ အိမ်ရှေ့အရောက်ပဲ။ ချမ်းသာလို့ပဲလားတော့ မဆိုနိုင်ဘူး တောနဲ့မြို့ လူနေမှုအဆင့်အတန်း အတူတူပဲ။ လယ်သမားတွေကတောင် ပိုချမ်းသာနေသေးတယ်။ နောက်ပို့စ်ကျရင် စိုက်ခင်းတွေ အကြောင်းတင်မှ ရွာတွေ ချမ်းသာတာ ပိုမြင်လိမ့်မယ်။
Akko မြို့ကိုတော့ မှတ်မိသွားပြီ …
တခြားမြို့နံမည်တွေက မှတ်ရခက်တာမို့ မေ့ကုန်တာပဲ …
မမှီရေ။ အခုမှ ဖတ်ဖြစ် ကြည့်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။
Akko ဆိုလို့ စိတ်ဝင်စားနေတာ (စာကြွင်း။ လူကိုစိတ်ဝင်စားခြင်းမဟုတ် အကြောင်းအရာကိုသာ စိတ်ဝင်းစာခြင်းဖြစ်၏ … လူကိုစိတ်ဝင်စားမိရင် မလွယ်ဘူး ဦးဇင်းပုနဲ့ တစ်ဂိုဏ်းထဲ အထင်ခံရတာ အရေးမကြီးဘူး သူ့ကောင်မလေးကို ပိုကြောက်မိတယ်)
ကိုယ်မသွားဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ ထင်တဲ့ မြို့လေးတွေအကြောင်း သိခွင့်ရတဲ့အတွက် မမှီကို ကျေးဇူးပါဗျ
B/L ပေါ်မှာတော့ HAIFA ကို အကြိမ်ကြိမ်ရေးနေရပေးမဲ့
အခုမှပဲ မမှီရဲ့ ကျေးဇူးကြောင့် HAIFA ဆိပ်ကမ်းရဲ့ပုံတွေကို မြင်ဘူတော့တယ်